जात बन्यो तगारो, सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान बेपत्ता - Samata Khabar
बैतडी, फागुन १४
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १५:१६
जीवनभर साथ दिने वाचा गरेर दलितकी छोरीसँग बिहे गरेका एक गैर दलित युवक सुत्केरी अवस्थामै श्रीमती छोडेर भागेका छन् । श्रीमतीले छोरी जन्माएको डेढ महिनामा सुत्केरी श्रीमतीसहित छोरी छोडेर भागेका उनी कहाँ छन्, के गर्दैछन् र किन भागे भन्ने कुराको अत्तापत्तो समेत छैन ।
विवाहपछि सुरेशको परिवारलाई आफूलाई त परै जाओस् छोरालाई घर पस्न नदिएपछि १० महिनासम्म गाउँलेहरूको सहयोगमा अलगै बसको राधाले बताइन् । ‘त्यसरी बस्दा समेत परिवारले सुख दिएन । हामी भोकै बसेको थाहा पाउदा गाउँलेले खानेकुरा दिन्थे ।
त्यो कुरा थाहा पाएपछि समेत सासु ससुराले गाउँलेको बेइजती गर्थे’ राधाले सुनाइन् । सुरेशसँगको विवाहपछि सुरेशको परिवारको यातना सहन नसक्दा सीमा नाकामा पर्ने झुलाघाट र भारतको पिथौरागढमा मजदुरी गरेर बस्दै आएको राधाको भनाइ छ ।
सुत्केरी अवस्थामै होटेलमा बसेको बेला सुरेश बेखर बनेपछि राधाले जात नै आफ्नो प्रेमको तगारो बनेको महसुस गरेकी छन् । मायामा घरपरिवार, समाज सबै त्याग्ने बाचा खाएका सुरेशले आफूलाई बिचबाटोमै अलपत्र पारेर छोडेपछि सुरेशका सबै वाचा झुठा थिए भन्ने उनलाई लाग्न थालेको छ ।
विवाहको एक हप्तामै राधाको नागरिकता र बिहे दर्ता बनाएका सुरेशले नागरिकता र बिहे दर्ताको प्रमाण पत्र समेत आफैसँग लिएर गएको कुराले राधालाई झन् मर्माहत बनाएको छ । ‘नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रसहित लिएर गएको कुराले उहाँ नियतवस् भागेको हो भन्ने लागेको छ’ उनले भनिन् ।
अछामबाट सुरेशकै मायामा घरपरिवारबाट भागेर बैतडी पुगेकी राधा अब के गर्ने ? कहाँ जाने ? चिन्तामा परेकी छन् । माइघरमा पनि आमाबुवा भारतमै बस्ने गरेकाले माइतीको घरमा पनि जान नसक्ने उनले बताइन् ।
‘एक्लै भएको भए केही गरेर खान सजिलो हुन्थ्यो । छोरीलाई बोकेर कहाँ जानु । के गर्नु । केहि सोच्नै सकेकी छैन’ राधा स्तब्ध बनिन् । महिला खबर बाट साभार